10 Toerana mahafinaritra an'ny LGBT mahafinaritra | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Toerana mahafinaritra an'ny LGBT mahafinaritra
(Last Nohavaozina: 14/05/2021)
Na diva ianao, fashionista, hafahafa, pelaka, vehivavy miray amin'ny vehivavy, na tsy vonona hamaritana tena, ireo 10 toerana mahafinaritra LGBT no hanatevin-daharana anao. Manomboka amin'ny fanorohana any Paris ka hatramin'ny fety toy ny kintana rock any Berlin, ireo tanàna eropeana mahatalanjona ireo dia mitaky zon'olombelona mitovy, ny avonavona, ary ny fitiavana amin'ny loko rehetra an'ny avana.
1. Toerana mahafinaritra mahafinaritra LGBT eto amin'izao tontolo izao: Berlin
Nanomboka tamin'ny fananganana ny fikambanana pelaka sy lesbiana voalohany manerantany izy rehetra. 1897 no taona nanamarika ny dingana voalohany Ny fanovana an'i Berlin ho renivohitra pelaka sy lesbiana eran'izao tontolo izao.
Ny hatsarana sy ny fitiavana dia misy amin'ny endriny rehetra, loko, sy ny firaisana ara-nofo. Berlin dia iray amin'ireo mandefitra indrindra, misokatra, ary mandray ireo tanàna manerantany. Berlin dia toerana mahafinaritra LGBT any Eropa ary raisina an-tanan-droa fitiavana isan-karazany. ankehitriny, berlin no tanjona faratampony LGBT, saingy nahazo ny lazany fotsiny izy tamin'ny taonjato faha-20, tena mahavariana tokoa ny lavitra nataon'ny tanàna.
Nollendorfplatz any Schoneberg no fo sy fanahy masiaka amin'ilay sehatra pelaka malaza any Berlin. Eto, afaka manao fety ianao, anao, zava-pisotro, ary mankafy ny fiainana sy ny kolontsaina LGBT.
Ny fotoana tsara indrindra hiaina ny extravaganza LGBT dia amin'ny fahavaratra, ao amin'ny epic CSD Berlin. efa ho 1 olona an-tapitrisany sy float haingo an-jatony no mamorona iray amin'ireo matso amin'ny rehareha lehibe indrindra eto an-tany, ho an'ny zon'olombelona sy ny fahalalahana hitia amin'ny loko rehetra amin'ny avana.
Zavatra tsara indrindra tokony hatao
Tsidiho ny tranombakoka Schwules pelaka, tsangambato voalohany amin'ny hetsika pelaka, ny bara Marietta malaza, Cafe Berio, ny klioban'ny pelaka taloha Heile Welt, na ho an'ny fety somary sangisangy ao amin'ny KitKat-Klub.
2. Toerana LGBT mahatalanjona any Netherlands: Amsterdam
Rehefa ianao no firenena voalohany eto an-tany manome alalana ny fanambadian'ny samy lahy na samy vavy, ianao koa dia iray amin'ireo toerana mahafinaritra sy mahafinaritra LGBT indrindra eto an-tany. Noho izany, Amsterdam nahafinaritra sy nahagaga no tanàna voalohany tany Eropa nampiantrano ny Lalao Gay ao 1998 ary ny diabe feno avonavon'i Amsterdam dia raisina ho iray amin'ireo tsara indrindra eran'izao tontolo izao.
Raha tsy fantatrao hoe aiza no hamely ny tanàna, dia mijanona eo amin'ny Pink Point, ny toerana misy fampahalalana momba ny LGBT- namana toerana any Amsterdam. Amsterdam dia mahatalanjona sehatra ho an'ny alina, fa alohan'ny hilentehan'ny masoandro, tokony handehandeha manaraka ny arabe sy ny faritra manaraka ianao, toerana misy ny fofonaina sy ny daka an'ny sehatra LGBT: Reguliersdwarsstraat, Kerkstraat manan-tantara, Amstel, ary avy eo mankany Zeedijk sy Warmoesstraat ho an'ny sehatry ny fiainana alina LGBT mahafinaritra any Amsterdam.
Jereo ny sehatra fitarihana malaza ratsy ao amin'ny Queen's Head, mitsofoka amin'ny cocktail ao Getto, mahazo aingam-panahy ao amin'ny fivarotam-boky LGTB ao Amsterdam, ny Merry, ary fety amin'ny taboo na club Exit amin'ny arabe Reguliersdwarsstraat. Ankoatry ny, ny reharehan'ny lakandranon'i Amsterdam dia iray amin'ireo filaharam-be tsy manam-paharoa fitsidihana an'izao tontolo izao.
3. Toerana itiavana LGBT tsara indrindra any Angletera: Brighton
Hatramin'ny 1930's Brighton dia toeram-pialofana azo antoka ho an'ny olon-drehetra izay mila mijery ny firaisana ara-nofo. Ilay tanàna amoron-dranomasina taloha dia nanjary toeran'ny LGBT sariaka tany UK, akaiky nefa lavitra ny renivohitra.
Ny faritra manodidina an'i Kemp Town dia ny faritra LGBT any Brighton, misaotra ireo trano fandraisam-bahiny misy azy, Pubs, sy trano fisakafoanana. Eto, hahita vibe mahavariana ianao, atmosfera mangatsiaka ahafahanao mankalaza ny fitiavana amin'ny endriny rehetra. Ary, raha mikasa ny handeha amin'ny làlana malalanao ianao, avy eo Brighton dia manana toerana mariazy vitsivitsy toy ny Royal Pavilion, ary avy hatrany dia manomboka ny fety amin'ny Charles Street na amoron-dranomasina Brighton.
Ankafizo ny pint amin'ny gay Pub Bulldog, fa miala sasatra aloha ao amin'ny The Brighton Sauna, ary hamita ny alina amin'ny Revenge, ny klioban'ny fiainana alina LGBT ambony.
4. Tanàna mahafinaritra LGBT mahafinaritra eto Alemana: Cologne
Ny tanàna misy pub bebe kokoa noho ny olona, ary hetsika be hambom-po bebe kokoa noho ny any an-toeran-kafa, Cologne dia iray amin'ireo tanjona mahafinaritra sy mahafinaritra indrindra LGBTQ any Eropa. Cologne dia LGBTQ-friendly tokoa ka manana ny fitsidihany Gaily manokana, mba hahafahanao mahita ny tsiambaratelo nafenina tsara indrindra tao an-tanàna raha misy tsiro sy loko avana.
Ankoatry ny, Cologne no tanjona faratampony LGBT, satria efa 2 sehatra pelaka, eny marina izany. Heumarkt-Mathiasstrasse taloha ary ny Triangle Bermuda an-tanàn-dehibe ho an'ny tanora tanora. Ny andrefana dia manana fety sy dihy fandihizana tsara indrindra hanetsiketsika ny vatanao sy ny atsinanana ho an'ireo toerana fialamboly milamina sy mahazatra.
Aza manam-potoana hitsidihana ny roa? Tsy misy ahiahy! Satria miaraka amin'ny lamasinina ambanin'ny tany S-Bahn, afaka mivezivezy im-betsaka araka izay irinao sy haingana be ianao.
Aza adino ny andron'i Christopher Street an'i Cologne, ilay Cologne Pride malaza eran-tany mazava ho azy. Ankoatry ny, Tsenan'ny Krismasy Gay any Cologne, ary Karnavaly tamin'ny volana feb. Ho an'ny fety aorian'ny fety dia jereo ny Deck 5 na Amadeus.
5. Toerana mahafinaritra mahafinaritra an'ny LGBT any Frantsa: Paris
Ny tanàna tantaram-pitiavana indrindra eto amin'izao tontolo izao dia mankalaza ny fitiavana isa-minitra isan'andro, ary raisina tsara ianao mankalaza ny fitiavanao amin'ny loko rehetra amin'ny avana. Feno glam, fomba, kilasy, ary mahafinaritra, Paris dia iray amin'ireo LGBT mahatahotra indrindra- toerana mahafinaritra eto amin'izao tontolo izao.
Ilay Marais mahafinaritra dia ivon'ny sehatry ny pelaka ao Paris, miaraka amin'ireo toerana malaza rehetra LGBT miorina ao amin'ny Place de la Bastille malaza, Kianja Repoblika, ary Hotel de Ville. Mandritra ny taona, nanomboka ny volana Janoary ka hatramin'ny Jolay, misy hetsika mahatalanjona natokana ho an'ny fiarahamonina LGBT: fety, zavakanto, horonan-tsary, ary mazava ho azy ny matso fieboeboana. Eto, hahatsapa ho ao an-trano ianao, ary manana fomba maro hizaha ny fiarahamonina frantsay LGBT ary hahita an'i Paris.
Raidd Barn ho an'ny mpandihy go-go ary dihy matanjaka, Kafe Debonair eo an-tampon'ny Cite de la Mode et du Design ho an'ny macaroon sy fahitana mahatalanjona an'ny Seine, ary ny bistro Badaboum ao amin'ny distrikan'i Bastille ho an'ireo artista frantsay vaovao sy lamaody rehetra, ary manoroha amin'ny Eiffel Tower ao aoriana.
6. Tanàna mahafinaritra LGBT mahafinaritra eto Austria: Vienna
Ny tantara sy kolontsaina Australiana manankarena dia feno tantara momba ny amperora gay, ka ny maha LGBT- namana dia ampahany amin'ny ADN an'ity tanàna tsara tarehy ity. Ary noho izany, tsy mahagaga raha afaka manohy any Wina 2 Fitsidihana tanàna gay mba hahitana ny tantaran'ny fiarahamonina LGBT sy ny fiainana. Ankoatry ny, torak'izany ihany koa amin'ireo toeran-kafa tiana LGTB ao amin'ny lisitray, misy hetsika LGTB betsaka kokoa noho izay azonao isaina mandritra ny taona.
Iray amin'ireo hetsika LGBT manokana indrindra amin'ny taona ny Rainbow Ball. Hotel Schonbrunn no mandray ity baolina lehibe ity, izay ahafahanao mandihy ny Waltz ary hampiseho ny lamaody maha-izy anao amin'ny akanjo akanjo sy akanjo vita amin'ny akanjo mahatalanjona.
Andramo ny kafe Viennese ao amin'ny Cafe Savoy, fety miaraka amin'i Miss Candy any amin'ny klioban'ny Heaven Vienna, Lazao fa ao amin'ny toerana Alpine mahatalanjona aho, ary raiso ny sary fampakaram-badinao rehefa manodidina anao ny maritrano mahavariana ao an-tanàna.
7. Tanàna mahafinaritra LGBT mahafinaritra any Irlandy: Dublin
Angamba fantatry ny maro ho hentitra be i Irlandy, ara-pivavahana, ary nangatsiaka ara-potoana. Na izany aza, tsy izany no mitranga any Dublin izay mavitrika, fahafinaretana, ary tena LGBT- friendly. In 2015, lasa ara-dalàna ny fanambadiana pelaka, tsangambato mahatalanjona amin'ny fanovana an'i Irlandy ho lasa malala-tanana, ary firenena misokatra.
Noho izany, ho hitanao i Dublin LGBT hafa mahavariana- fitsidihana namana any Amsterdam sy berlin. Volana Pride ny volana jona ao Dublin, fa tokony hijery ny International Dublin Gay Theatre Festival ihany koa ianao, ny lehibe indrindra eto an-tany.
Cocktail na fety ao amin'ny George Bar, institiota pelaka ao Dublin, PantiBar, Oscars Cafe, fitsangantsanganana an-tsambo, na ny sauna pelaka mba hiala sasatra no zavatra farany tokony hatao mba tena hankafizanao ny vondron'olona LGTBQ mahatalanjona any Dublin.
8. Toerana mahafinaritra an'ny LGBT mahafinaritra: Belzika
Ghent sy Bruxelles dia fantatra amin'ny 2 toerana mahafinaritra indrindra LGBT any Belzika. Ity firenena ity no faharoa nanamafy ny fanambadian'ny samy lahy na samy vavy. Any Bruxelles, Rue du Marche au Charbon no ivon'ny seho LGBT.
Ohatra, ao amin'ny Rainbow House, afaka mankafy ny festival film Lesborama ianao, kanto fampirantiana, ary hetsika ara-kolontsaina maro hafa. Na izany aza, raha te hampideradera ny nomen'ny natiora anao ianao, avy eo Chez Maman dia mandray ny divas amin'ny loko sy ny volon'ny avana.
9. Toerana mahafinaritra ho an'ny LGBTQ mahafinaritra: London
The West End, Pubs, maritrano, ny mpanjakavavy. London dia sary masina iray tsy noho ny maha mpanjaka azy fotsiny, fa satria toerana mahafinaritra LGBT any Eropa izy io. Ny tanàna dia microcosmos ho an'izao tontolo izao, midika izany ny tanàna izay mandray olona avy amin'ny vazan'izao tontolo izao, koa tena mafana sy sariaka amin'ny pelaka, vehivavy miray amin'ny vehivavy, hafahafa, na transgender.
Fivarotam-boky manokana, MAHAVARIANA bara tafo, teatra, ary mozika, London's nahazo toerana mahaliana be dia be mba hankafizanao ny fiainana sy ny kolontsaina LGBT tsara indrindra.
Noho izany, raha te hankafy ny tsara indrindra amin'ny LGTB any London ianao, mandehana any amin'ny Dlastone Superstore ho an'ny cabaret tsara indrindra. Ho an'ny seho tsara indrindra, Mahafinaritra ny pub Glory, ary aza hadino ny mijanona amin'ny fivarotam-boky LGBT tranainy indrindra any Angletera, Gay's The Word.
10. Toerana mahafinaritra an'ny LGBT mahafinaritra: Milan
Tsy toy ireo tanàna hafa tia LGBT ao amin'ny lisitray, Ny zon'ny LGBT dia tsy ara-dalàna any Milan. Na izany aza, ny renivohitra lamaody sy kanto eto amin'izao tontolo izao dia mirehareha amin'ny sehatry ny pelaka mampihetsi-po ary mandray ny fetiben'ny sarimihetsika LGTBQ isan-taona aza.
Rehefa any Milan, ny manodidina an'i Porta Venezia no ivon'ny fiainana sy ny kolontsaina LGBT. Amin'ny arabe Lecco sy San Martini, ho hitanao ireo bara sy klioba tia namana indrindra.
Tena mora ny manofana mpandeha manodidina an'i Eropa ary mitety lalana Save A Train saingy tsy mora foana ny mahita toerana mahafinaritra LGBT mahafinaritra, koa izany no antony nanoratanay ity lahatsoratra bilaogy ity ho anao.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “10 LGBT Làlana mahafinaritra ve ianao” amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fawesome-lgbt-friendly-destinations%2F%3Flang%3Dmg - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
pelaka vehivavy miray amin'ny vehivavy LGBT LGBTdestinationsineurope LGBTfriendlycities LGBTFriendlyDestinations LGBTQ PrideParadeEurope